जब ६ वर्ष गुफाबास गरेको भेंडा बाहिर निस्किँदा देखियो यस्तो ! – Saurahaonline.com
जब ६ वर्ष गुफाबास गरेको भेंडा बाहिर निस्किँदा देखियो यस्तो !
जब ६ वर्षपछि भेंडालाई मानिसहरुले गुफामा फेला पारे, तब त्यो कुनै भेंडा हो भनेर छुट्टाउनै नसकिने अवस्थामा थियो । ४ वर्षको उमेरमा गुफा पसेको भेंडा १० वर्षको उमेरमा बाहिर निस्किँदा जिउमा २०जना मानिसलाई शुट बनाउन पुग्नेजति ऊन पालेको थियो ।भेंडाको शरीरमा ६० पाउण्ड ऊन जम्मा भएको थियो र भेंडाको जिउ नै उनको डल्लाजस्तो भएको थियो ।
अहिले उक्त भेंडा बिरामी परेर मृत्यु भयो । उक्त भेंडाको मृत्युमा न्युजिल्याण्डमा कुनै राजनेताको मृत्युजस्तै गरी शोक मनाइएको थियो ।